ढकालले ल्याए कान्छा र्‍यापरको दुःख (भिडियो)
प्रकाशित : शुक्रबार, बैशाख २०, २०७६२२:०८
संगीत । गायक तथा संगीतकार बिनोद ढकालले ११ वर्षीय बालक रोजन बराइलीलाई नेपालकै कान्छा र्‍याप गायकको रुपमा प्रस्तुत गरेका छन् । बाल्यकालदेखि नै र्‍याप संगीतमा आकर्षित भएका धादिङका बराइलीलाई गायक ढकालले आफ्नै संगीतको नयाँ र्‍याप गीत ‘दुःख’ मार्फत सांगीतिक क्षेत्रमा ल्याएका हुन् ।
गायक ढकालको समेत स्वर रहेको उक्त गीतमा कान्छा ¥यापर बराइलीले र्‍याप हानेका छन् । उक्त गीतको म्युजिक भिडियो हालै सार्वजनिक भएको छ । रमाइलो कुरा के छ भने उक्त गीतका रचनकार पनि र्‍यापर बराइली नै हुन् । गीतमा दिनेश श्रेष्ठको संगीत संयोजन छ । गायक ढकाल पछिल्लो समय आफ्नो लामो कपाल छोट्याएर चर्चामा आएका थिए । विवाह बन्धनमा बाधिनका लागि गायक ढकालले झण्डै एक दशकअघि पालेको कपाल काटेका हुन् ।
‘दुःख’ को म्युजिक भिडियोलाई सोनम पाख्रिनले निर्देश्ँन गरेका हुन् । उक्त गीतमा ठिट्ठा साबको उपनामले चिनिने कलाकार किशोर भण्डारी, कविता आलेमगर तथा जोर्डन राजभण्डारीले अभिनय गरेका छन् । सञ्जित श्रेष्ठद्वारा छायांकन गरिएको उक्त म्युजिक भिडियोलाई माधव बेल्बासेले सम्पादन गरेका हुन् ।
साउथ इण्डियन निर्देशकको फिल्ममा शाहरुख ?
‘छक्का पञ्जा ३’ को सेलिब्रेसन (फोटो कथा )
हङकङबाट ‘पुरानो बुलेट’ को सुरुवात
के ‘बोबी’सिक्वेलको तयारीमा छन् उमेश र कविता ?
बोर्ड अध्यक्ष भट्टराई भन्छन् ‘कार्यन्वयनमा इमान्दारिता देखाउनु जरुरि छ’
दशकमा यी फिल्ममा चुके आमिर
‘शुद्ध मंगल ज्यादा सावधान’ युएईमा प्रतिबन्ध
डोनाल्ड ट्रम्पको असन्तुष्टी
Sainik Day Tundikhel
दसैँमा ‘ए मेरो हजुर ४’
आयंकाले सार्वजनिक गरे विवाहको डेट
फिल्म निर्देशनको तयारीमा निश्चल
दर्शकले भने ‘लभ डायरीज राम्रो छ’